ကိုလံဘီယာဆဲလ်ဆာ 10 ထိပ်တန်းအဆိုတော်များနှင့်တေးဂီတအဖွဲ့များ
ဝန်းရံသောကျော်ကြားမှု ကိုလံဘီယာဆဲလ်ဆာ ယနေ့အမွေများနှင့်အောက်ပါခညျြအနှောများနှင့်အနုပညာရှင်များဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဂီတထုတ်လုပ်မှုတင်းကျပ်စွာဆက်စပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los niche အဖြစ်ဤစာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးအမည်များ, la Suprema Corte နှင့်ပိုယ် Camacho ထဲကထွက်ခွာနေကြသည်ကိုငါသိ၏။ သို့သော်ကိုလံဘီယာဆဲလ်ဆာသို့စွန့မည်သူမဆိုအောက်ပါအနုပညာရှင်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရရန်လိုအပ်နေပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los တိုက်တန်းနစ်မှ Grupo niche အောက်ပါဆဲလ်ဆာဂီတအတွက်အများဆုံးတက်ကြွစတိုင်များတစျဦး၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမည်များဖြစ်ကြသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Titanic
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Titan - '' Grand Exitos '' ။ ဓာတ်ပုံ Courtesy ဒစ္စကို Fuentes
1982 ကတည်းက, ဒီတီးဝိုင်းကိုလံဘီယာဆဲလ်ဆာ၏လူကြိုက်အများဆုံးအသံတစ်ဦးကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပါရမီဂီတပညာရှင် Alberto Barros အားဖြင့် Barranquilla ၏မြို့ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los Titanic ထိုကဲ့သို့သော "UNA Palomita", "por Retenerte" နှင့် "Sobredosis အဖြစ်ပုဒ်အပါအဝင်မြောက်မြားစွာ hits ဖြန့်ချိပြီ။ " ဂီတစကားပြော, ဒီတီးဝိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုသူတို့ရဲ့ဂီတအတွက် trombones ၏တက်ကြွသောအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်တီးဝိုင်း Fruko y က Sus Tesos ၏ဒဏ္ဍာရီအုပ်စုတစ်ခုက extension အဖြစ် 1974 ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ. အများအပြားလူကြိုက်များအဆိုတော်များအများအပြားပိုပြီးအကြား, Piper Pimienta, ဂျိုးအာရိုယို, Saulo Sanchez, Joseito Martinez နှင့် Juan Carlos Coronel နဲ့တူအနုပညာရှင်တွေအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များမှာလက်တင်ညီအစ်ကိုများပူးပေါင်းပါပွီ။ ဒီတီးဝိုင်းကနေထိပ်တန်းအပုဒ် "," "Dime အဘိဓါန် Que Paso" "Las Caleñasသားတော်ကို Como လာ့စ်ဗီး Flores" နှင့်အပူပိုင်း hit Buscandote တူသောသီချင်းများပါဝင်သည် "Sobre လာ့စ်ဗီး Olas ။ "
percussionist Diego မှ Gale အားဖြင့် 1989 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ဒီတီးဝိုင်း Medellin ၏မြို့ကနေအကျော်ကြားဆုံးဆဲလ်ဆာအုပ်စုတစ်စုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသူအပေါင်းတို့အနှစ်တလျှောက်လုံး Grupo Gale နာမည်ကျော်လမ်းကြောင်း "အယ်လ် Amore De သည် Mi Vida" Se Fue "" နှင့် "သည် Mi Vecina" ဟုပနားမားအဆိုတော် Gabino Pampini featuring တစ်ဦးဂန္အပါအဝင်အများအပြား hits မှတ်တမ်းတင်ထားသောသိရသည်။
ဂျိုးအာရိုယို - '30 Pegaditas de Oro '' ။ ဓာတ်ပုံ Courtesy ဒစ္စကို Fuentes / မိုင်ယာမီမှတ်တမ်း
ဂျိုးအာရိုယိုအကျော်ကြားဆုံးတစ်ဦးအဖြစ်သမိုင်းကိုပြောင်းရွေ့ ကိုလံဘီယာအနုပညာရှင် ။ မိမိအ repertoire ဆဲလ်ဆာထိမိဒါပေမယ့်လည်းကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောကာရစ်ဘီယံ rhythms တစ်ခုအမျိုးစုံရပေါင်းစပ်မှအပူပိုင်းဂီတကျေးဇူးတင်စကားမသာ မဲ့ရင်ဂယ့ , ဆိုးကာနှင့် ရက်ဂေး ။ ဂျိုးအာရိုယိုရဲ့အကျော်ကြားဆုံးဆဲလ်ဆာသီချင်းတချို့က "Pa'l Bailador", "En Barranquilla ငါ့ကို Quedo", "Yamulemao" နှင့်တူသော hits ပါဝင်သည် ", La Rebelion ။ "
la Misma Genting
နီးပါးနှစ်ပေါင်း 30, la Misma Genting ကိုလံဘီယာဆဲလ်ဆာ၏အသံပုံဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ repertoire ကိုလံဘီယာဆဲလ်ဆာ၏ခက်ခဲစည်းချက်ကနေ 1980 ကတည်းကဒီအမျိုးအစားကြီးစိုးသောရင်ခုန်စရာစတိုင်အထိအသံတစ်ဦးအပြည့်အဝ spectrum ကိုဖုံးလွှမ်း။ ဒီတီးဝိုင်းတို့ကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးသီချင်းတချို့က "ဂျူနီတာ AE", "Titico", "Tu y ကယို" နှင့်ပါဝင်သည် ", La chica က de ချီကာဂို။ "
Orquesta, La Identidad
Cali မြို့၌မွေးဖွားခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ဆဲလ်ဆာမြို့တော်အဖြစ်ဒေသခံများအားဖြင့်ရည်ညွှန်းတဲ့နေရာ,, La Identidad နာမည်ကျော် hit များလွှတ်ပေးရန်ကတည်းကသိသိသာသာလူကြိုက်များပျော်မွေ့ရှိပါတယ် "Mujeres ။ " ဒီအဖွဲ့ကအပိုဆောင်းသီချင်းများထိုကဲ့သို့သော "Quiereme", "Golpe De Gracia" နှင့် "Tu Desden အဖြစ်ပုဒ်ပါဝင်သည်။ "
Guayacan Orquesta - '' စု Historia ဂီတ '' ။ ဓာတ်ပုံ Courtesy FM ရေဒစ္စကို
ဒါဟာဝေးနေဖြင့်ကိုလံဘီယာကနေအရေးအပါဆုံးချည်နှောင်ခြင်းကိုဖြေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပါရမီဂီတပညာရှင် Alexis ဝီလိုဇာနိုကဦးဆောင်ပြီး, Guayacan Orquesta ဒေသခံဆဲလ်ဆာလှုပ်ရှားမှုအရှိဆုံးတီထွင်ခဲ့တယ် repertoire ၏တဦးတည်းကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဒီအဖွဲ့ကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အရှိဆုံးအမှတ်ရစရာ hits အချို့သည်ထိုကဲ့သို့သော "Muchachita", "Oiga, ရွံ့, Vea", "Vete" နှင့်အဖြစ်သီခငျြးမြားလညျးပါဝငျ "Ay Amore Cuando Hablan လာ့စ်ဗီး Miradas ။ "
ဆဲလ်ဆာဂီတဘိုဂိုတာအတွက်အမြဲလူကြိုက်များခဲ့သော်လည်းကိုလံဘီယာဆဲလ်ဆာအများအားဖြင့်တိုင်းပြည်၏မြို့တော်အပြင်ဘက်တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောထိုလမ်းကြောင်းသစ်ဒေသခံတီးဝိုင်း, La 33, ကိုလံဘီယာကနေဒီနေ့အကျော်ကြားဆုံးဆဲလ်ဆာခညျြအနှောတစျဦး၏ဆိုက်ရောက်နှင့်အတူပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ဆဲလ်ဆာဂီတ၏မူလအရသာမှဆွဲဆောင်ခြင်းအားဖြင့်,, La 33 ရပျလုံးကိုကျော်နောက်လိုက်အများကြီးရယူလိုက်သည်။ ဒီအဖွဲ့ကထိပ်တန်းသီချင်းများ ", La Pantera Mambo" နှင့်နာမည်ကျော် hit ပါဝင်သည် "စော်လဒက်။ "
Fruko က y sus Tesos
အဆိုပါဘေ့ကစားသမားများနှင့်ထုတ်လုပ်သူ Julio Ernesto Estrada (Fruko) က 1970 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ဒီ band ကိုဒေသခံဆဲလ်ဆာအောင်မှာပထမဦးဆုံးအလေးနက်နှင့်အောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုကိုယ်စားပြုသည်။ အဆိုပါတီးဝိုင်းအလယ်ပိုင်း 1970 ခုနှစ်များအတွင်း Edulfamid '' Piper Pimienta '' Diaz, Alvaro ဟိုဆေး '' ဂျိုး '' အာရိုယိုနှင့် Wilson က Manyoma featuring အဆိုတော်တွေရဲ့ဒဏ္ဍာရီ trilogy ပာကျေးဇူးတင်လူကြိုက်များရရှိခဲ့သည်။ Fruko y က Sus Tesos နေဖြင့်ထိပ်တန်း hits ထိုကဲ့သို့သော "အယ်လ် Preso", "အယ်လ် Ausente", "Tania" နှင့်အဖြစ်ဂန္ပါဝင်သည် "အယ်လ် Caminante ။ "
Grupo niche - '' Tapando အယ်လ် Hueco '' ။ ဓာတ်ပုံ Courtesy Codiscos
ဒဏ္ဍာရီ Jairo Varela, အကောင်းဆုံးကိုလံဘီယာတေးရေးဆရာတဦးကတည်ထောင်, Grupo niche ကျယ်ပြန့်တိုင်းပြည်ကနေအကောင်းဆုံးဆဲလ်ဆာတီးဝိုင်းစဉ်းစားသည်။ တီးဝိုင်းတည်ထောင်ခဲ့သည့်အခါ 1980 ခုနှစ်ကတည်းက, ဒီ Cali-based အုပ်စုကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ကျယ်ပြန့် repertoire ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဆဲလ်ဆာအီရတ်တွင် ရိုမန်းတစ်တီးလုံးနှင့်အတူပုဒ်။ တီးဝိုင်းရဲ့လူကြိုက်အများဆုံး hits အချို့သည် Un Aventura ",", La Magia De Tus Besos "နှငျ့ timeless hit" ", Buenaventura Y ကို Caney" ကဲ့သို့သီချင်းများပါဝင်သည် "Cali Pachanguero ။ "
ဘချားတာတေးဂီတသီချင်းများ - ဘချားတာတေးဂီတ Songs ရဲ့ Playlist ကို
10 အကောင်းဆုံးဂန္ထဝင် Reggaeton သီချင်းများ
10 အကြောင်းရင်းဒိုင်နိုဆောမကောင်းပါအိမ်မွေး Make
Aldebaran တစ် Starry Bull ၏မီးတောက်လောင်နေလိမ္မော်ရောင်-နီမျက်လုံး Explore
ကင်ဆာနှင့် Capricorn မတ်ေတာသအသုံးပြုပုံများ
6 - ထိုမိတ်ဆွေတို့ကို
ပိုးစုန်းကြူးနှင့် Lightning ချို့ယွင်းမှုများအကြောင်း 10 စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်
အပြာရောင်၏တစ်ဦးက Short, ဝမ်းနည်းသမိုင်း
ယာဉ်မောင်း vs ပျံသန်း: အပတ်ဝန်းကျင်အဘို့ သာ. ကောင်း၏ Is ဘယ်?
Francisco ကက de Orellana ရဲ့အမေဇုံမြစ်တောင်တက်
Star Wars Lore အတွက် Jedi မာစတာ
ဒါဟာအဆိုပါ Cue Stick နှင့်အတူသင့်ရဲ့ရင်ဘတ်ပွတ်သပ်ရန်ကောင်းမွန်သောလား?
ပတ္တမြားအတွက် Commands များကိုဆန်းစစ်ဖို့ OptionParser အသုံးပြုခြင်း